ad hoc အနုညာတစီရင်
နေအိမ် / Archives for Ad Hoc Arbitration
တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်များအတွက်လက်ရှိအစီအစဉ်များထက်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်? အီးယူနှင့်ကနေဒါဒီတော့စဉ်းစားရန်ပေါ်လာ. ဥရောပသမဂ္ဂအကြားမကြာသေးမီက-အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဘက်စုံစီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အတွက် (အမေရိကန်) နှင့်ကနေဒါ, နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်ဖို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်အီးယူတို့ကရှေ့ကိုထားလျက်ရှိသည်နှင့် […]
22/11/2016 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဖက်စပ်ခုံသမာဓိဘုံများမှာ. ဖက်စပ်သဘောသဘာဝအတွက်မကြာခဏအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာများမှာ, အမျိုးမျိုးသောတိုက်ကြီးအတွက် operating ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှမိတ်ဖက်ပါဝင်သောနှင့်မျိုးစုံဥပဒေများနှင့်တရားစီရင်မှုပါဝင်သော. ဒါကကိုယ့်တဦးတည်းပါတီ၏အမျိုးသားရေးပြည်နယ်တရားရုံးများအရင်ကထက်ပိုပြီးကြားနေ setting ကိုအတွက်ဖြေရှင်းခံရဖို့ဖက်စပ်အငြင်းပွားမှုများများအတွက်မြင့်တက်လိုအပ်မှဦးဆောင်. ခုံဖှဲ့။ စီရငျဆုံးဖွတျခွငျး, […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, ad hoc အနုညာတစီရင်, ICC ကအနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ
2016 ကျင်းပရေးအနုညာတတရားစွဲဆိုထားအပေါ် UNCITRAL မှတ်စုများ
02/11/2016 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ကျင်းပရေးအနုညာတတရားစွဲဆိုထားပေါ် UNCITRAL မှတ်စုများ၏ပထမဦးဆုံး version ကို, ပုံမှန်အားဖြင့်ခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုနှင့်အတူဆက်စပ်ကိစ္စများနှင့်အတူခုံသမာဓိယောဂီကူညီရည်ရွယ်, အတွက် UNCITRAL ကော်မရှင်ကမွေးစားခဲ့သည် 1996 ဇူလိုင်လအတွက်ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်အစားထိုးထားသည် 2016, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရရှိနိုင်. မှတ်စုများများအတွက်အသုံးဝင်သော tool ကိုဖွစျဖို့သက်သေပြခဲ့ကြ […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, ad hoc အနုညာတစီရင်, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, UNCITRAL အနုညာတစီရင်